Etu esi ahụ okwuntughe zoro ezo na akara mmuke na usoro ndị a | Akụkọ akụrụngwa
Ị chọrọ ele okwuntughe mgbe akara akara? Iji ọtụtụ n'ime anyị na ọ ga-mere dịkarịa ala otu ugboro ná ndụ anyị na n'ihi Omenala nke iji ihe ncheta isi na ihe nchọgharị weebụ, anyị na-fọrọ ichefu ha n'oge ụfọdụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka ọtụtụ mmadụ na-anwa ịhụ okwuntughe zoro n'azụ asterisocs nke na-adịkarị n'ọhịa ahụ.
Site n'enyemaka nke ngwa ole na ole, ngwaọrụ ma ọ bụ ndọtị na mgbakwunye maka ihe nchọgharị weebụ, anyị ga-enwe ohere lee okwuntughe nke zoro n'azu kpakpando, ihe dị mfe ịme ma ọ bụrụhaala na anyị nwere ohere ịnweta sistemụ arụmọrụ anyị na kọmputa nkeonwe.
1 BulletsPassView Iji lelee okwuntughe zoro ezo
2 Akara akara Paswọdu Nledo iji chọpụta paswọọdụ echefuru anyị
3 Akara mmuke iji hụ okwuntughe n'azụ akara mmuke
4 Iji ndọtị na ihe nchọgharị Internetntanetị
5 Iji Ihe Itule elele okwuntughe
BulletsPassView Iji lelee okwuntughe zoro ezo
Nke a bụ ụzọ ọzọ anyị ga - atụ aro ugbu a, ngwa ọrụ ị nwere ike ibudata na ukara website nke ya Mmepụta. O kwuru na BulletsPassView dakọtara na nke mbụ ya na Internet Explorer na ngwa ndị ọzọ ole na ole, ọ bụ ezie na ihe nchọgharị otherntanetị ndị ọzọ enwere ike ịnweta ndakọrịta ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị.
Ọmụmaatụ, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype, Opera na Windows Live Messenger (maka ndị na-etinyebeghi dịka nkwanye anyị n'elu) ha ga-egosi na a ụfọdụ larịị nke ndakọrịta na ngwá ọrụ a.
Akara akara Paswọdu Nledo iji chọpụta paswọọdụ echefuru anyị
Ngwa ọzọ na-adọrọ mmasị iji rụọ ọrụ bụ nke a, nke ị nwekwara ike ibudata na ya websaịtị onye nrụpụta n'agbanyeghị, na ihe nchọgharị dị iche karịa Google Chrome. Ọ bụrụ na ị jiri ya, ị ga-enweta ozi na-egosi na ngwa a enweghị ikike ịhụ okwuntughe zoro ezo na ihe nchọgharị Internetntanetị kwuru.
N'ihi ya ngwa ị ga-arụnye ya na Windows, nke ga-enyocha ihe niile edenyere aha na ihe nchọgharị otherntanetị ndị ọzọ ị nwere ike iji na kọmputa gị.
Akara mmuke iji hụ okwuntughe n'azụ akara mmuke
Ọ bụrụ na enweghị nke ikiri ihe eji enyocha paswọọdụ anyị tụpụtara n'elu ọrụ n'ihi akụkụ ụfọdụ ekwekọghị, ị kwesịrị ịnwale nke a.
Dị ka ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu, Igodo nke igodo ọ na-eme nnukwu ndakọrịta na Internet Explorer; ozugbo ị na-agba ọsọ a ngwa, ị dị nnọọ nwere pịa bọtịnụ na-ekwu «naghachi» Na voila, na ihe nke sekọnd ị ga-enwe ike ịmasị na interface ya, ndepụta dum nke okwuntughe, ibe weebụ nke esi wepụta ya na ụfọdụ data ndị ọzọ.
Iji ndọtị na ihe nchọgharị Internetntanetị
Ngwa ndị anyị kpọtụrụ aha n’elu maka hụ okwuntughe zoro n'azụ kpakpando ha ga na-arụ ọrụ, mgbe na-agba ọsọ na Windows. Ugbu a ọ bụrụ na anyị achọghị ịwụnye ihe yiri nke ahụ mgbe ahụ anyị nwere ike jiri ya na ndọtị na-adọrọ mmasị nke dakọtara na Firefox na Google Chrome.
Mgbati maka Google Chrome nwere aha Gosi okwuntughe na Elekwasị anya na ọ na-egosi n'ọhịa ahụ (ebe a na-edekarị paswọọdụ) okwu e jiri mee ya; Anyị nwere ike ịme ihe yiri ya na '' Gosi okwuntughe '' na Firefox, n'agbanyeghị na anyị ga-arụ ọrụ ma ọ bụ mechie akara ngosi ahụ ka anyị nwee ike zoo okwuntughe.
Iji Ihe Itule elele okwuntughe
O doro anya na aghụghọ iji hụ okwuntughe nke anyị ga-ekwu n'okpuru ga-abụ ọkacha mmasị nke ọtụtụ, n'ihi na ebe a anyị agaghị enwe mkpa ịwụnye ngwa iji na-agba ọsọ na Windows na njọ, ga-etinye mgbakwunye ma ọ bụ ndọtị na ihe nchọgharị Internetntanetị. N'ezie ihe anyị ga-eji ga-abụ obere aghụghọ nke ga - enyere anyị aka ịhụ ozugbo, okwuntughe nke zoro n'azụ kpakpando.
Mepee ihe nchọgharị internetntanetị gị.
Gaa na peeji nke ebe akara mmuke gosipụtara iji banye.
Pịa kpakpando ndị a ugboro abụọ iji mee ka ha họrọ.
Ugbu a jiri bọtịnụ nri gị òké na nhọrọ a ma họrọ «Nyochaa mmewere".
Site na koodu niile, choo ebe okwu a bu “password".
Họrọ okwu a, hichapụ ya site na ịpị igodo «tinye».
Ozugbo ị ga-enwe ike na-enwe mmasị, na kwupụta n'aka ekpe bụ na peeji nke ebe ị na-dee paswọọdụ; akara mmuke ga-apụ n'anya ozugbo, na ị ga-enwe ike ịhụ okwuntughe ejirila iji bido ọrụ ahụ.
You mara usoro ndị ọzọ iji lelee okwuntughe? Gwa anyị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi lelee okwuntughe zoro ezo n'azụ akara ngosi
Daalụ maka ntinye gị.
Typedị sọftụwia a bara ezigbo uru.
Ana m ewere ohere igosi nhọrọ dị oke ọsọ (na-enweghị sọftụwia) iji gosi igodo:
- Anyị ga-eji Google Chrome
- Anyị họrọ igodo (akara mmuke niile)
- Pịa aka nri -> Nyochaa
- Anyị na-agbanwe =dị = »paswọọdụ» na Pịnye = »ederede»
- Igodo ga-egosipụta na-akpaghị aka
Rificjọ aghụghọ. Daalụ nke ukwuu Jasape.
Zaghachi Eloy Nuñez
Amaghị m ma ọ na-arụ ọrụ
Zaghachi daniel felipe carmona
Na Firefox, ọ bụrụ na ịchekwa okwuntughe nke mere na ihe nchọgharị ahụ na-echeta ha, na windo ebe a na-echekwa ha enwere bọtịnụ na-ekwu ihe dịka "egosi okwuntughe"